Nhau - Kuongorora uye kufungidzira kweChina kupinza uye kutumira kunze mamiriro muna 2021
Kuongorora uye kufungidzira kweChina kupinza uye kutumira kunze mamiriro muna 2021
Pasi pechiyero chekuti denda repasi rose riri pasi pekutonga, hupfumi hwenyika hunodzoka zvishoma nezvishoma, uye hupfumi hweChina hunokura zvakadzikama, zvinofungidzirwa kuti kuendesa kunze kweChina nekutengesa mu2021 kuchave kungangoita 4.9 trillion US dollars, iine gore-gore. kukura kweinenge 5.7%; yeiwo, iyo yose kunze kwenyika ichave ingangoita 2.7 trillion US madhora, iine gore-gore-gore kukura ingangoita 6.2%; iyo yekunze kunze ichave ingangoita 2,2 tiririyoni US madhora, iine gore-gore-gore kukura ingangoita 4.9%; uye iyo yekutengesa yakasara ichave ingangoita 5% 76.6 bhiriyoni emadhora eku US. Pasi pemamiriro ezvinhu ane tariro, kukura kweChina nekutengesa kunze kwenyika muna 2021 kwakawedzera ne3.0% uye 3.3% zvichiteerana zvichienzaniswa nematanho ebenchmark; pasi pechiitiko chekusava netarisiro, kukura kweChina nekutengesa kunze kwenyika muna 2021 kwakadzikira ne2.9% uye 3.2% zvichiteerana zvichienzaniswa nematanho ebenchmark.
Muna 2020, China inoverengera coronavirus pneumonia control matanho aishanda, uye China yekutengeserana kwekunze yakatanga kudzvanywa, uye huwandu hwekukura hwakawedzera gore negore. Iyo yekuburitsa vhoriyamu muna 1 kusvika Mbudzi yakawana kukura kwakanaka kwe2,5%. Muna 2021, kukura kweChina nekutumira kunze kwenyika kuchiri kutarisana nekusaziva kukuru.
Kune rimwe divi, kuiswa kwemajekiseni kuchabatsira mukugadzirisa hupfumi hwenyika, indekisi yemitemo mitsva yekutengesa kunze kwenyika inotarisirwa kuvandudzwa, uye kusainwa kwechibvumirano chakabatana chezvematongerwo enyika (RCEP) kuchakurudzira kubatanidzwa kwekutengeserana pakati peChina ne nyika dzayo dzakavakidzana; kune rimwe divi, mafambiro ekudzivirira kutengeserana munyika dzakasimukira haasi kudzikira, uye denda rekumhiri kwemakungwa riri kuramba richivira, izvo zvinogona kukanganisa hutongi hweChina.